Galmudug oo faahfahin ka bixisay Duqayntii loogaystay Alshabaab ee aaga Degmada Bacaadwayn | HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Galmudug oo faahfahin ka bixisay Duqayntii loogaystay Alshabaab ee aaga Degmada...
Galmudug oo faahfahin ka bixisay Duqayntii loogaystay Alshabaab ee aaga Degmada Bacaadwayn
Galmudug oo faah faahin kasoo saartay duqeyn dhanka cirka ah oo ka dhacdey Gobolka Mudug.
Ciidamada qaranka iyo kuwa Galmudug ayaa saakay weerarro hor leh ku qaaday fariisimaha argagixisada ee aagga Qaycad, ayadoo dagaalka maantay ay qeyb ka ahaayeen diyaaradaha duqaynta geysta ee Ciidamada maraykanka oo gantaal la helay fariisinka qaar ka mid ah amiirada sare ee kooxda Shabaab.
Ilo Alshabaab dhexdooda iyo dadka deegaanka laga helayo ayaa tilmaamaya in ugu yaraan 50 ka mid ah madaxda iyo maleeshiyaadka argagixisada Shabaab ay halkaas ku la’deen, dhaawacooduna uu kor u dhaafayo 80.
Dadka argagixisada ee duqaynta ku dhintay ayaa la sheegayaa in ay ku jiraan saddex nin oo ajnabi argagixiso ahaa kuwaasoo la sheegay in ay ahaayeen xeeldheerayaal dhanka qaraxyada iyo dagaalada ku dhufoo ka dhaqaaqda ah ee kooxaha argagixisadu ay adeegsadaan.
Dagaalka ay wadaan ciidamada xaq u dirirka ah ayaa sii xoogaysanaya, waxaana muuqata in hadda ay ku soo biireen saaxiibada Soomaaliya gaar ahaan Maraykanka.
Previous articleDegdeg Diyaaradaha Maraykanka oo Alshabab ku duqeeyey meel ay isku aroorsanayeen oo u dhow degmada Bacaadwayn
Next articleXogtii u danbeysay ciidanka galmudug oo guulo gaaray iyo duqaymo shababka mudug lagu weeraray
Galmudug oo xaqijisay in dagaal yahano sar sare ladu dilay dagaalkii shabab mudug lagula galay
Galmudug oo xaqijisay in dagaal yahano sar sare ladu dilay dagaalkii...